I-iPhone 6 no-6 plus ngeke isathengwa ku-Apple Store | Ngivela kwa-mac
I-iPhone 6 no-6 plus ngeke isathengwa ku-Apple Store
Kusukela namuhla, isizukulwane esiphumelele kakhulu senkampani enama-apula alumayo sehlile emlandweni. Kusese ukuphela okuhle, kusasebenza njengamanje futhi kunamandla. Izoqhubeka nokuvuselela okungenani eminye iminyaka emibili futhi abaningi basanda kuyithenga, kepha esitolo se-Apple sekuvele kuningi. I-iPhone 6 ne-6 plus, imodeli ka-2014, inyamalale ezitolo nakukhathalogi yakwa-Apple. Ingabe kufanelekile ukuyihoxisa ngenxa yokufika kwe-iPhone 7? Yebo.
Okulandelayo ngizokunikeza izizathu zami zokuthi kungani ungathengi i-iPhone 6 nokuthi kungani maduze kuzoba ukuphela okudala noma okuphansi.
I-Apple iyeka ukuthengisa i-iPhone 6 ne-6 plus
Uma ufuna i-iPhone kusuka kuzizukulwane ezedlule noma eshibhile kancane, into ejwayelekile ukuthi izinketho zakho yi-iPhone 6, i-SE noma i-6s manje njengoba yehle ngentengo futhi inyuse umthamo wokugcina. Abangani abaningi noma engibajwayele bangibuza nge-iPhone 6 nokuthi ngiyithenge noma cha. Impendulo yami ihlala ifana: CHA.
Futhi ngizochaza isizathu sesinqumo sami. Ngine-iPhone 6 64Gb. Angihleli ukuthenga i-7 noma i-terminal efike ngo-2017. Nge-iOS 10 idivayisi yami isebenza kahle futhi ayinginiki izinkinga zanoma yiluphi uhlobo, kepha lokho manje. Angazi onyakeni owodwa noma emibili ukuthi izosebenza kanjani. Uma ufuna i-iPhone kungenxa yokuthi ufuna ihlale isikhathi eside, yingakho ngincoma ukuthi uthenge amamodeli wamanje kakhulu. Isici esinethonya elikhulu engicabanga ukuthi ngamandla, ngoba umuntu ofuna ama-terminals amadala akabheki i-3D Touch noma lezo zinto, bafuna ukusebenza kahle namandla. I-iPhone 6 ine-1Gb Ram futhi isebenza kahle. Kepha ama-6 akhuphukela ku-2Gb, kanti i-7 plus iya ku-3Gb. Kungenzeka ukuthi ngokuzayo lokho kuzoshiya i-iPhone 6 iphelelwe yisikhathi.
Manje isinyamalale esitolo futhi izinketho yi-iPhone SE, 6s no-7. Ngaphandle kweyodwa engu-4 intshi, okunye kuku-32, 128 no-256Gb. Uzothola o-6 kwabangu-16 noma abangu-64 kuphela, kuncane futhi akufanele kuthengwe. Ngubani onakho ukukujabulela, futhi noma ngubani ofuna okusha ongamfuna owesi-7, kuwufanele.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Imikhiqizo ye-Apple » iPhone » I-iPhone 6 no-6 plus ngeke isathengwa ku-Apple Store
Ngokusho kukaTim Cook: Iqiniso elingathandeki lingcono kune-virtual
I-iPhone 7 Plus, umbala omnyama, ne-128 GB, izintandokazi ze-presale